features - Synonyms of features | Antonyms of features | Definition of features | Example of features | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for features
Top 30 analogous words or synonyms for features
Windows 2000 Windows 2000 Server မိသားစုတွင် အပိုဆောင်း features များ ပါဝင်လာခဲ့ပြီး
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် ၏အင်္ဂါရပ်များ ဖေ့စ်ဘုတ်အသုံးပြုသူများအား ဆွဲဆောင်မှု အရှိဆုံး Features ထဲတွင် အပါအဝင်ဖြစ်သည်။မိမိအား Facebook တစ်ခွင်မှ အဖြစ်အပျက် အချက်အလက်များကို မျက်ခြေမပျက်စေရန် အသေးစိတ်ဖော်ပြပေးခြင်းဖြစ်သည်။
Windows ME မိုက်ခရိုဆော့ဖ်သည် ယခင်ဝင်းဒိုးမှ graphical user interface ကို မွမ်းမံခဲ့ပြီး Windows 2000 ၏ features အချို့ကို မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ မိုက်ခရိုဆော့ဖ်၏ အချို့သောစာရွက်စာတမ်းများအရ ကွန်ပျူတာ လည်ပတ်ရေးစနစ်၏ အခြားနာမည်မှာ Windows Me ဖြစ်သည်။
Ruby (programming language) Ruby ဟာ reflective, Dynamic, Object-Oriented Programming Language ပါ။ သူ့ရဲ့ syntax ကတော့ Perl နဲ့ Smalltalk ကဲ့သို့တော့ Object-oriented Features တွေပါဝင်ပေါင်းစည်းထားပြီး Python, Lisp, Dylan နဲ့ CLU ရဲ့ features တွေကိုလည်း မျှဝေထားပါတယ်။ Ruby ဟာ single-pass interpreted language ပါ။ သူဟာ C နဲ့ ရေးထားတဲ့ free software မှ implementation လုပ်ထားပါတယ်။
ရုရှားသဒ္ဒါ The spoken language has been influenced by the literary, but continues to preserve characteristic forms. The dialects show various non-standard grammatical features, some of which are archaisms or descendants of old forms since discarded by the literary language.
ဂျူးမလား Joomla ဆိုတာကတော့ free ,opensource content managemetn system တစ်ခုပါ။ Joomla မှာ features တွေ မြောက်များစွာပါဝင်ပြီး လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းတွေ များပြားလှပါတယ်။ RSS feeds, print ထုတ်လို့ရတဲ့ စာမျက်နှာ , news flashes , blogs, polls , website searching နှင့် ဘာသာစကားများစွာ ပါရှိပါတယ်။ Joomla ဟာ GPL Licesed ယူထားပါတယ်။ သူဟာ Mambo ရဲ့ fork ကနေ ဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။ သူ့ကို PHP programming lanaguage နဲ့ရေးသားထားပြီး MySQL database ကိုအသုံးပြုထားပါတယ်။